Maalinta: Ogast 29, 2019
Safarada Habeennimo ee Metro Istanbul! .. Sidee loo bixiyaa Amaanka? .. Sidee loo Qaadaa Lacag Bixinta Habeenki Maarso? ..
24 waa magaalo weyn oo ku nool Istanbul, iyadoo tixgelinaysa shuruudaha Istanbul, iyo baahida dadka deggan Istanbul ee loogu talagalay “Khadadka Laydhka ee taraf arendan Laydhka waxaa qiimeeya Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul. [More ...]
Boqolkiiba 70 ee Wadada Labaad ee Diyaaradda Sabiha Gökçen ayaa la dhameystiray
Hüseyin Keskin, Maareeyaha Guud iyo Gudoomiyaha Gudiga Agaasimeyaasha Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHM,), Boqolkiiba 95 ee dhismayaasha adeegga, Boqolkiiba 50 ee dhismaha munaaradda iyo dhismaha garoonka diyaaradaha Sabiha Gökçen Airport-ka labaad. [More ...]
Tareennada ku yaal Eskişehir ayaa lagu qurxiyay farriimaha 30 ee Agoosto Agoosto
Mashruuca Wagon Dream, oo ay si wada jir ah u abaabuleen Eski Esehir Metropolitan Municipal iyo Furya Association, shaqada wacyigelinta ee horey loo fuliyay si loo soo jiito dareenka rabshadaha ka dhanka ah haweenka ayaa la xaqiijiyey Maalinta Guusha ee 30. taraamka [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli 30 Bilaash ah Ogost
Muwaadiniinta, Baska Dawlada Hoose ee Kocaeli, nidaamyada tareenka iyo gaadiidka badda ayaa ka faa'iideysan doona Xuska Maalinta Xulista ee 30 Agoosto oo bilaash ah. Basaska ay leedahay degmada Kocaeli ee Magaalada 30 maalinta oo dhan maalinta Jimcaha ee Jimcaha [More ...]
Kucukcekmece Wadada dhinaceeda woqooyi lagu dhajiyay Habeenki
Iyada oo ay ugu wacan tahay mashruuca kordhinta awoodda ee loo yaqaan "TEIAS", qodista qodista oo laga bilaabay Kucukcekmece North Side Road ayaa loo habeeyay qaab looga hortago taraafikada. Sida ku xusan qawaaniinta cusub, gaadiidka u dhexeeya saacadaha 22.00 - 06.00 waa la xiri doonaa. [More ...]
Khadadka Xariiqda Xidhmada 24 Hour Oo Lagu dhawaaqay Istanbul
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu saxaafada la wadaagay faahfaahinta safarka saacadaha X 24 ee Istanbul di kaas oo uu shalay siiyay warkiisa wanaagsan. Sida ku xusan macluumaadka uu siiyay Imamoglu, 30 wuxuu bilaaban doonaa Agoosto, Jimco - Sabti, 6 metro iyo 24 [More ...]
Berri Gaadiidka Dadweynaha ee Bursa Bilaash
Gaadiidka Dadweynaha ayaa bilaash ku noqon doona Bursa sababtuna tahay Maalinta Guusha ee 30 Agoosto. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Burulaş, gaadiidka dadweynaha ayaa maalin walba lacag la’aan u ah qof kasta, halka muwaadiniinta wata 'Bukart', gaar ahaan nidaamyada tareenka [More ...]
Rakibaadda Nidaamka Kaamirooyinka Heerka Sare ee otomatiga ah
TCDD 5. Samaynta Nidaamka Kaamirooyinka ee Isugeynta Heerka otomatiga ah iyo Xarummaha Maneuvering 15 ee Agaasinka Gobolka. gobolka [More ...]
Safarka Nostalgia oo ay la socoto Pergamon Ferry oo ku yaal Izmir Bay
Pergamon Ferry, oo noqday mid ka mid ah astaamaha magaalada oo carshi ka dhigtay quluubta dadka reer İzmir tan iyo markii la furay 1951, wuxuu ku socdaa safar cusub. Dawlada Hoose ee Magaalada Metrozmir, Barnaamijka la yiraahdo ost Nostalgia Ferry program [More ...]
Jiritaanka Maraakiibta Doonta Kurtaran ee TRNC waxay muujineysaa Xuquuqda Si Aad Ugu Hadasho Badda Dhexe
Wasiirka Turhan, Wasiirka Howlaha Guud iyo Gaadiidka ee TRNC, ka hor kulanka ay la qaateen Tolga Atakan, kii ugu dambeeyay ee 20 Luulyo iyo nashaadaadyada xarakaadka xorriyada ee ka dhex jira baaxadda markab si loo badbaadiyo Burcad Badeedda. [More ...]
Waxaa jira taksiyo oo tagaya garoonka diyaaradaha laakiin haddii aad tagi karto… Ka dib socdaalkii 25 ee tagaasida ee magaalada Istanbul, ayaa qiimaha tagitaanka garoonka diyaaradaha ee tagaasida ee tagaasida kor u kacay. Inaad u tagto ugaadhsadeyaasha ka socda aag ahaan iyada oo cashuurta laga qaado 130 TL [More ...]
Xubin ka tirsan guddiga TÜRSAB Mehmet Nezih Hacıalioğlu iyo wafdiga la socda ayaa booqday Maareeyaha Guud ee Gaadiidka TCDD Erol Arıkan. Xubin ka tirsan guddiga TÜRSAB Mehmet Nezih Hacıalioğlu, Gudoomiyaha BTK Black Black West Bcan Ercan [More ...]